Opharetha bezingcingo abashibhile eSpain | Ezezimali Zomnotho
Opharetha bezingcingo abashibhile eSpain
USusana Maria Urbano Mateos | | Ukuxhumana
Namuhla sizokunikeza isifinyezo esihle sakho konke opharetha bezingcingo abashibhile eSpain futhi okuyizinto ezikunikeza izinzuzo ezinhle kakhulu, hhayi ngentengo kuphela kepha nangokwembozwa nezinzuzo kuzingcingo zikazwelonke nezamazwe omhlaba. Ngemuva kokufunda lokhu okuthunyelwe, siyakuqinisekisa ukuthi uzoba nezinto ezicace kakhudlwana futhi uzokwazi ukwazi ukuthi iziphi ozinikezayo okuhle nokubi kuncike kulokho okufunayo kanye nezidingo zakho.
1 Yiziphi izinhlobo zezinkampani esingazithola ngaphakathi kweSpain
2 Yibaphi opharetha abanenethiwekhi yabo
3 Yibaphi opharetha bezingcingo abashibhile eSpain
7 Ikhebula Leselula
8 UDigi Mobil
9 Eroski Ucingo
11 GT Ucingo
12 Iselula Ejabulisayo
13 Okushaya Iselula
15 Ion Ucingo
16 I-Jazz panda
17 Jazzcard Ucingo
22 Izinkampani ezingamaselula kuphela
24 Iselula yeRiphabhulikhi
Yiziphi izinhlobo zezinkampani esingazithola ngaphakathi kweSpain
Ukukunikeza umbono wokuthi ihlukaniswe kanjani, singasho ukuthi ngaphakathi kweSpain kukhona izinhlobo ezimbili zenethiwekhi yeselula.
Abokuqala yilabo abanenethiwekhi yabo kanti eyokugcina yilabo abasebenzisa inethiwekhi yenye inkampani ukuhlinzeka ngokwanele kumakhasimende abo futhi kumele baqashe inethiwekhi kubantu besithathu.
Yibaphi opharetha abanenethiwekhi yabo
Ngaphakathi kweSpain kukhona opharetha abancikile kunoma ngubani ukuze ukwazi ukunikeza ukumboza kumakhasimende akho. Le migqa ikhona I-Yoigo, iVodafone, i-Orange neMovistar.
Ngokuphathelene nabasebenza lokho abanayo inethiwekhi yabo, bangoSimo nabamasmovil.
Yibaphi opharetha bezingcingo abashibhile eSpain
I-Orange ingenye yezinkampani lokho kuya ngomunye ukuze akwazi ukuhlinzeka ngembozo kumakhasimende akhe. Noma kunjalo, inikeza izinhlelo ezinhle kakhulu kubantu abadinga ukonga kulezi zinhlobo zamasu. Lapha, kubiza amazwe afana ne-US. INorway, i-Ukraine, iRussia noma iCanada ibize amasenti ayi-0,14.
Ngaphezu kwalokho, i-Orange ithengisa imikhiqizo nge-inthanethi ngokuxhuma i-4G kunoma iyiphi indawo endlini. Ungathola imizuzu engcono kakhulu engenamkhawulo yama-euro angu-19,95 ngenyanga.
I-Bankinter iphinde inikeze insizakalo yocingo nge izinhlobo ezintathu zerhafu ehlukile lapho ungeke ukhulume kuphela kepha uzulazule. Izinhlelo zokusebenza zamahhala zebhange kanye nezixwayiso zingatholwa ngocingo.
Yenye enye izinkampani ezishibhile futhi iyinkampani ye-OMV futhi inikela kuphela ngamanani wokukhuluma ngentengo enkulu, kepha ayinayo imininingwane yedatha. Lapha, izingcingo zikazwelonke ziyisenti.
Ngenye inkampani edinga enye ukuhlinzeka ngezinsizakalo zayo. Izipesheli izingcingo nedatha kuma-mobiles futhi ikuvumela ukuthi ulungiselele uhlobo lwesilinganiso ngendlela oyithandayo.
Nge-digimovil ungakujabulela okukodwa kwe- opharetha bezingcingo abashibhile eSpain futhi etholakala nakwamanye amazwe afana ne-Italy. Le nkampani inikeza ngamanani entengo ehlukile noma i-inthanethi ephathekayo.
Ngenye ye Izinkampani ze-OMV okungeyesitolo sezitolo ezinkulu futhi inikezela ngemininingwane ye-inthanethi ephathekayo ngentengo ephansi kakhulu kanye ne-ADSL yamathebulethi.
Le nkampani inezingcingo ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lwezikhungo zezingcingo. Ungathola imizuzu yamahhala enkampanini ngokuthenga esitolo sakho.
Ngenye yezinkampani ezishibhile zocingo eSpain futhi zithengiswa kuphela Ezweni laseBasque. Lokhu kunikeza abantu ifoni engaguquguquki nephathekayo futhi ine-broadband ne-TV.
Lawa maklayenti ungawathola i-inthanethi yamahhala emgwaqweni ngokusebenzisa opharetha.
Ingagxila kuzingcingo zomhlaba jikelele futhi ingafinyelelwa amabhondi kazwelonke ngemizuzu yamahhala nedatha. Zithengwa ngamabhondi wezinsuku ezingama-30.
Le nkampani ikunikeza izinsizakalo ze-inthanethi nezocingo kuwo wonke ama-mobiles. Ine amazinga wokonga ukusetshenziswa kwabantu abachitha imali encane kepha bengenayo imali enkulu ngemizuzu.
Le nkampani inikeza izinsizakalo uhhafu wemali yokukhuluma nokuzulazula kuyo amabhonasi e-inthanethi. Ungathola i-intanethi eshibhile eSpain ngama-4,9 euros ngenyanga.
I-OMV enikela ngamanani eselula, enkulumo kanye nawokusakaza, kanye namabhonasi e-inthanethi.
Le yinkampani yabashayeli bezingcingo eshibhile eSpain egxile kwabazisebenzelayo nakuma-SME, ngoba inikela ngamanani ngaphandle kokungena kwizivumelwano noma kwabasebenzi.
Ungayithola i- Yabelana ngenkontileka + evumela ukwaba ukusetshenziswa phakathi kolayini bezingcingo abaningana.
Inikezela ngezinsizakalo kuzo zonke izinhlobo zezinkampani ngentengo emakethe enhle kakhulu. Yenzelwe izinkampani nabantu ngabanye emhlabeni jikelele.
Kungakanani ngohlelo lwe Imali engu-0 euros ngaphandle kwedatha futhi ikhokhisa inani eliphansi ngomzuzu. Inezingcingo ezingenamkhawulo kanye ne-2GB yedatha yama-euro angama-22 ngenyanga.
Le nkampani ihlinzeka ngezinsizakalo njengomunye wabasebenza ngocingo eshibhile eSpain kepha igxile kubantu okufanele shayela iChina kakhulu. Izingcingo eziya emazweni ase-Asia zibiza isenti eli-1 inani eliphansi.
Le sevisi yeJazztel isebenza ngamanani wokunikeza we-Orenji ku- izindlela ezikhokhelwa kusengaphambili.
Le yinkampani yaseGranada enikezayo inthanethi ekhaya nezingcingo. IJefnet inikeza i-intanethi enhle, inkampani isebenzisa enye ikhebula ne-fiber optic.
Le nkampani ingesinye sezinkampani ezishibhile ezisebenza ngocingo eSpain futhi inikela ngezingcingo ezingumakhalekhukhwini, izingcingo zasendlini ne-ADSL, kanye nezizinda.
Futhi inamakhasimende a umakhalekhukhwini ukuphepha iphakethe futhi inikeza inketho yokwakha ama-akhawunti akho e-imeyili.
Phakathi kwezinkampani zokugcina eziyingxenye yabashayeli bezingcingo abashibhile eSpain kukhona i-LCRcom, okuyinkampani yezingcingo ephathekayo enamanani akhokhelwa kusengaphambili futhi enezinsizakalo ezijwayele izinkampani ezincane Izixazululo zeVoip.
Ngaphandle kokungabaza, inesilinganiso esihle kunazo zonke eSpain ngoba ayinaso isikhungo sezingcingo.
ILebara Mobile, ngaphezu kweSpain, ikhona emazweni amaningi afana neNorway, Switzerland, Sweden kanye ne-United Kingdom.
Ucabangela abantu abavela kwamanye amazwe futhi badinga ukushaya izingcingo eziningi ezivela eSpain. Le nkampani inakho kuphela izinketho ezikhokhelwa kusengaphambili.
Lokhu yi opharetha bezingcingo abashibhile eSpain. Ngokuqinisekile abaningi babo ubungazi ngabo ngoba abadumile kangako, kepha, banikela ngezinzuzo ezinkulu kuwo wonke amazinga.
Impela manje usunombono ongcono wokuthi ungabathola kanjani oshibhile bezingcingo eSpain ngaphandle kokuhlanya.
Izinkampani ezingamaselula kuphela
Kunjalo, inethiwekhi yokuxhumana nabantu isivele inesilinganiso sefoni yakho ephathekayo esivumela ukuthi ujabulele ama-combos ahlukene. Ungathola i-combo yezinsuku eziyi-7 ekunikeza ithuba lokujabulela ama-80 MG njengesipho seviki eligcwele.
I-combo kwezinsuku eziyi-14, okunikeza ukufinyelela ku-150 MG wesipho senyanga yonke kanye ne-combo yezinsuku ezingama-30 lapho ungajabulela khona kufika kuma-250 MG nama-euro angama-5 ebhalansi yesipho.
Yenye enye izinkampani eziphansi lokho kukunikeza ithuba lokujabulela izinzuzo ezinhle kakhulu kuselula yakho. Ngaphezu kwalokho, inkampani ikunaka uqobo, ilalele icala lakho ngaso sonke isikhathi.
Izinketho nge-republicamóvil yilezi:
Okukhethwa kukho okuncane- Le nketho ikunikeza ithuba lokujabulela ama-euro angu-2,9 kuphela ngenyanga inketho engcono kakhulu ngokwe-MB, ikunikeze inani lama-400 nokushaya noma amasenti ngomzuzu.
Inketho encane- le nketho ikunikeza ithuba lokujabulela i-1,2 GB namasenti angu-0 ngomzuzu kusuka kuma-euro angu-5,9 ngenyanga.
Inketho emaphakathi- Ekugcineni, unenketho encane ekunikeza ithuba lokujabulela kufika ku-1,2 GB ngenyanga kanye nemizuzu eyi-100 yamahhala ngama-9,8 euros ngenyanga.
Ngaphezu kwalokho, i-republicamóvil ikunikeza okunye kokukhushulwa okuhle eSpain, ngoba ungajabulela imali efinyelela ku-euro eyodwa kwi-invoyisi ngayinye yomngani ngamunye omumemayo ukuba ajabulele inkampani.
Ku-Anema ungajabulela okuningi izinzuzo zefoni yakho. Ungajabulela izinhlobo ezintathu zamanani.
Eyokuqala ingenye yezintandokazi kakhulu ngoba ingama-euro angu-6,95 kuphela ngenyanga futhi ikunikeza ukufinyelela ku-1 MB nemizuzu engama-60 ngenyanga kuzingcingo zikazwelonke nezamazwe aphesheya. Futhi unokuthumela okungenamkhawulo kwe-SMS.
Inketho yesibili ngama-19,95 euros ngenyanga futhi ikunikeza ukufinyelela ku-2 GB nangaphezulu kwemizuzu engama-60 kumakholi kazwelonke nakwamanye amazwe ngaphandle kokuqalwa kwezingcingo. Ungathembela nakuma-SMS angenamkhawulo.
Ekugcineni, kunenketho yama-euro angu-24,95 ngenyanga. Le nketho ikunikeza ukufinyelela ku-7 GB wejubane nemizuzu engaphezu kwengu-60 kumakholi angenamkhawulo ngaphandle kokuqalwa kwezingcingo. Ngaphezu kwalokho, ungajabulela i-SMS mahhala.
Ku-yoigo unezinhlobo eziningana zamanani.
Imali engapheli. Lapha ungajabulela i-8 GB ye-inthanethi enezingcingo ezingenamkhawulo zama-euro angama-23 kuphela ngenyanga.
Imali engu-0. Lapha ungajabulela imizuzu eyi-100 yezingcingo zamahhala ne-5 GB ye-inthanethi ngama-euro angama-15 kuphela ngenyanga.
Imali engu-Zero engu-1,2 GB. Lokhu kungenye yamakhasimende asetshenziswa kakhulu, ngoba inika izinzuzo eziningi ngentengo ephansi. Ungenza izingcingo ezingenamkhawulo ngama-euro angama-0 inyanga yonke futhi ube ne-1,2 GB internet ngama-euro angu-8,80 kuphela ngenyanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ukuxhumana » Opharetha bezingcingo abashibhile eSpain
Ama-akhawunti asebhange amahle kakhulu emakethe
Qopha ukuthengiswa kuka-Alibaba ngoSingles 'Day